‘कुटुमा कुटुले’ स्वस्तिमालाई फाइदा दियो कि घाटा ? « Mazzako Online
‘कुटुमा कुटुले’ स्वस्तिमालाई फाइदा दियो कि घाटा ?
अहिले एउटा गीत खुबै चर्चामा छ । फिल्म ‘२ रुपैयाँ’मा समावेश गीत ‘कुटुमा कुटु’ युटुबमा हिट छ । यो गीतमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले नृत्य गरेकी छिन् । स्वस्तिमा यो भिडियो हिट भएसँगै चर्चामा छिन् । तर, यो भिडियो हिट हुँदा उनलाई फाइदा भयो कि घाटा ?
दर्शकमाझ स्वस्तिमाले राम्रो नृत्य गर्न सक्ने कलाकारको छाप त छाडेकी छिन् । तर, कतै अभिनेत्रीलाई भोली एउटा गीतका लागि मात्र अफर आयो भने ? अहिले स्वस्तिमाका पति निश्चल बस्नेत पनि फिल्मको एउटा गीतमा मात्र नृत्य गरिरहेका छन् ।
उनै स्वस्तिमाको हिजोआज सुन्दरता र फिगरको चर्चा हुन थालेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा पुग्दा आकर्षक पहिरन लगाउने स्वस्तिमा शरीर मेन्टेनमा पनि ध्यान दिन थालेकी छिन् । ‘छक्का पन्जा २’मा काम गरेकी स्वस्तिमा अहिले निर्देशक दीपाश्री निरौलासँग पनि नजिक देखिन्छिन् ।